Olon'olon-tsotra sy orinasa kely - Mpanamboatra an-tapitrisany
Olon-tsotra sy varotra kely
Isika dia mpiara-miasa amin'ny mpamatsy serivisy iraisampirenena ho an'ny olona tsirairay / olona / Businesses ary fianakaviana izay mila torohevitra sy consultant momba ireo olana toy ny fifindra-monina, ny fanabeazana, ny fananganana orinasa, ny serivisy momba ny asa, ny fametrahana iraisam-pirenena, ny serivisy ara-dalàna, ny fanampiana Visa, ny toro-bola ara-bola, ny fananana fananana trano, Formation ny orinasa iraisam-pirenena, fanokafana kaonty amin'ny Banky iraisam-pirenena, ny fahazotoana, ny fikajiana ny kaonty, ny fisoratana anarana ara-barotra, ny vahaolana ara-barotra HR, ny birao ara-batana, ny fahazoan-dàlana, ny programa momba ny fifindra-monina, ny vahaolana famatsiam-bola miasa, ny famatsiam-bola, ny fanombohana ny orinasam-bola, ny fanoloran-tena, ny famarotana asa, ny vahaolana amin'ny asa. , Noho ny fahazotoana sy ny fanarahana.
Manangana fahafahana ho an'ny tsirairay sy ny orinasa izahay mba hahazoana fiainana tsara kokoa ho azy ireo.
Izahay dia mpanolotsaina anao hatoky foana mandritra ny fotoana lava.
Amin'ny alàlan'ny traikefa anananay sy serivisy isan-karazany omen'ny orinasanay, manampy ireo tompona orinasa tsy miankina izahay miaraka amin'ny ankohonany hanangana orinasa ary hanangana orinasa vaovao, hanitatra, hampitombo ary hanohana ny orinasan'izy ireo, tsara toerana izahay hitarika anao amin'ny lalana mankany fahombiazana. Na liana amin'ny M&A ianao, mifindra toerana, mitady hampidina ny birao minutia, mitady renivohitra na mpiara-miasa stratejika na mitady ny drafitry ny fifandimbiasanao. Momba antsika kely izany.
Tamin'ny alalàn'ny traikefa be dia be, ny fahaizantsika sy ny serivisy maro nomen'ny fikambanana sy ny orinasantsika, dia nanampy sy nanamora ny tompona orinasa, orinasa sy freelance, niaraka tamin'ny fianakavian'izy ireo hanangana orinasa sy hanangana orinasa vaovao, hanitatra, hitombo ary hanohana ny orinasan'izy ireo na mitady asa dia tena misy toerana izahay no hitarika anao eo amin'ilay lalana mankany amin'ny fahombiazana.
Na mahaliana anao ny Merger sy Acquisition, famindrana, te-hahemotra ny asa sy ny fizotran'ny birao, te-hahita karama na paikady stratejika na mitady ny fandaharam-piraisan'ny taranaka mandimby anao, na mitady toro-hevitra momba ny fananana na Serivisy momba ny fifindra-monina na fanabeazana any ivelany na IT Serivisy azonay manampy anao amin'ny serivisy rehetra araka ny voalaza.
Ny vahaolana famoronanay dia misy:
Soso-kevitra sy fanohanana azo avy amin'ny fifindra-monina.
Drafitra sy toro-hevitra vita amin'ny paositra.
Famaritana ny làlana isaky ny dingana rehetra.
Mora ny fizotran'ny orinasa.
Manomeza sary mazava momba ny fandaniana fanampiny, tsy misy korontana miafina.
Fanampiana ao amin'ny kaontin'ny Banky Opening izay olana manahirana amin'ny firenena vaovao.
Fiaraha-miasa eto an-drenivohitra.
Merger and acquisition opportunity.
Fizarana hanaisotra birao any aoriana
Ny mpiasa miasa
Fandraisana an-tanana HR
Ny serivisy IT, toa ny, Website na Ecommerce Site
Fifanekena amin'ny mpampiasa sy ny mpikambana
Tahirin-kevitra amin'ny fandaminana
Fividianana trano sy fifanarahana momba ny fanofana
Famoronana fifanekena sy fifanarahana
Ny politikam-piasan'ny fampiharana sy ara-dalàna sy ny boky fampianarana
Ary ny maro hafa
Miara-miasa aminao izahay hamaritana drafitra iray izay manampy amin'ny fampiasana ny mety / toe-javatra / fahaizanao ara-bola hahatanteraka ny tanjonao sy ny hetahetanao. Ny tanjonay farany dia ny hanome antoka fa manome ny karazana serivisy tena mety aminao sy ny ankohonanao ary ny fikambananay izahay, afaka miasa tsirairay izahay, mivantana ary amin'ny alàlan'ny telefaona, skype, viber, whatsapp, izay hatrizay mety aminao ny fomba fifandraisana.
Ny fototry ny asantsika dia miharihary amin'ny fanaovana izay mahasoa indrindra ho an'ny mpanjifantsika.
Mirehareha amin'ny tenanay amin'ny fanodinana ny fahasarotana izahay, manavotra angovo rehetra amin'ny angovo sy fotoana.